Somali Wasaarada Caafimaadka Hirshabelle oo ku baaqday in wax loo qabto xarunta qaaxada Jowhar -
HomeWararkaSomali Wasaarada Caafimaadka Hirshabelle oo ku baaqday in wax loo qabto xarunta qaaxada Jowhar
Somali Wasaarada Caafimaadka Hirshabelle oo ku baaqday in wax loo qabto xarunta qaaxada Jowhar
Mas’uuliyiin ka tirsan wasaarada caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabelle oo maanta booqatay xarunta qaaxada ee magaalada Jowhar ayaa ugu baaqay wasaarada caafimaadka iyo hay’adaha deeqa bixiyaha inay gacan ka geystaan sii horumarinta howlaha ay xaruntan u qabato bulshada Soomaaliyeed.
Kusimaha wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabelle ahna wasiiru dowlaha wasaaradaas Dr Muxidiin Muqtaar Macalin Yusuf ayaa kormeeray qeybaha kala duwan ee xarunta cudurka qaaxada ee magaalada Jowhar halkaas oo bukaano badan ay maalin walba ka qaataan dawooyin.
Madaxa Xarunta Qaaxada magaalada Jowhar Axmed Xasan Goomey ayaa ugaga warbixiyay mas’uuliyiinta howlaha xaruntu ay qabato iyo baahiyaha ka jira.
Ugu dambeyntii shir jaraa’id oo uu qabtay Wasiiru dowlaha caafimaadka Hirshabelle Dr Muxidiin ayaa u mahadceliyay wasaarada caafimaadka dowlada federalka waxana uu sheegay in baahiyo badan ay ka jiraan xaruntan,isagoo baaq u direy wasaarada caafimaadka iyo hay’adaha deeqaha bixiya .
“Xaruntu waxa ay bulshada u haysaa howlo muhiim ah balse waxay u baahan tahay dayactir, in la kordhiyo shaqaalaha ka howlgala, in loo helo bukaanada meel ay jiiftaan iyo cunto maadaama ay ka imanayaan deegaano ka fogfog magaalada Jowhar.”ayuu yiri Dr Muxidiin.
Xarunta Qaaxada ee magaalada Jowhar ee isbitaal goboleedka Intersos ayaa muddo ka badan toban sano waxaa lagu daweynayay bukaano qaba cudurka qaaxada.